ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: မောင်မျိုး မေမေ့ မိန့်မှာမှု
မေ့မေ့မောမော မိန့်မိန့်မူးမူး မွှမွှမွှေးမွှေး မူးမူးမိုက်မိုက် မမမောင်မောင် မိမိမှားမှား မိုက်မိုက်မဲမဲ မှောင်မှောင်မွန်းမွန်း မြိုးမြိုးမြက်မြက် ..................
မောင်မျိုး မင်းမှားမယ် မူးမယ်...။ မှာမယ်။ မှောက်မှိန်း၊
မူးတယ်ဗျို့.... အပြီးထိမဖတ်နိုင်တော့ဘူး..။ ဖတ်ပြမယ်ဆိုလည်း နားထောင်ချင်ဘူးဗျို့...။
ဒါမျိုးကိုရင်နော်တို့ ဟန်သစ်ငြိမ်တို့ သိပ်တတ်ကြတယ်..
မှုံမှိုင်းမှိုင်းမို့ မောမှ...မော...။ :)
ဖတ်ပြီး မျက်စိတွေမူး ခေါင်းတွေမူးလာလို့ ထပ်မူးအောင် အ၀သွားသောက်တော့မယ် ( ရေကိုပြောတာ)
မူးသွားပြီ မောင်မျိုးရေ ...
ကိုဟန်သစ်ငြိမ်က မ-တလုံး အတော်ကျေတာပဲ ကိုး ...
မောင်မျိုး မင်းမိန်းမ မော့်မော့်မှာ မြန်မှမြန်… မြင်မှမြင်။
ဆိုတော့ မောင်မျိုးမိန်းမနာမည်က မော့်မော့်ပေါ့နော်
ဘယ်လောက်တောင် အမော့်ကြိုက်လည်းဆို မိန်းမနာမည်တောင် မော့်မော့်တဲ့ :P လူကြီးတွေ မျက်စိနောက်အောင်။ နဂိုက သွေးတိုးကလည်းရှိနေတာ့
တော်တော် မူးသွားပြီ :)
မောင်မျိုးမွေးနေ့... ဆုတောင်းမလို့ လာတာ...
ပျော်စရာမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မောင်မျိုးရေ....း))
ချစ်သယ်ရင်း ပန်းမင်းသမီးလေး မြောင်မျိုး...
ဘ၀မှာ မှောင်မိုက်မှုတွေ ကင်းလွတ်ပါစေ။မျောက်မွေးတဲ့ မိန်းမနဲ့ လွဲပါစေ၊ အမြဲတမ်းမော်ကြွားနိုင်ပါစေ ဘ၀ကို မြင့်မြင့်မားမား အောင်မြင်နိုင်ပါစေ။မျှစ်ချိုးသွားရင် မြွေ အန္တရယ် ကင်းပါစေ။ မိန်းမ မော်မော်နဲ့ ဘ၀ကို မြင့်မြတ်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ဘ၀မှာ ပြင်ရခက်တာမျိုး မမှားစေနဲ့။မျက်ကန်း သရဲမကြောက်သလို မဖြစ်ပါစေနဲ။အမှန်မြင်မှ အမြင်မှန် ရတာမို့.. အမြင်မှားခြင်း ကင်းပါစေ.
မွေးနေ့မှသည်။. မျှော်မှန်းထားသော မြင့်မြတ်သော ဘ၀ကို မြန်မြန် ရောက်ပါစေ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ငြိမ်းချမ်းသာယာ စွာဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ